Madaxweyne Xasan oo sheegay in Dowladdiisu ay qaban doonto Muddada uga hadhsan Xilka Saddex Arrimood oo Muhiim ah | Salaan Media
Madaxweyne Xasan oo sheegay in Dowladdiisu ay qaban doonto Muddada uga hadhsan Xilka Saddex Arrimood oo Muhiim ah
Sabti, September 21, 2013 (SM) — Madaxweynaha Soomaaliya, Xasan Sheekh oo ka hadlayay kulan xalay lagu qabtay magaalada Washington DC ee dalka Mareykanka oo uu booqasho ku joogo ayaa sheegay in dowladdiisu ay qaban doono muddada uu xafiiska hayo saddex arrimood oo ay u arkeen inay yihiin kuwa ugu muhiimsan howlaha horyaalla.
Madaxweyne Xasan ayaa sheegay in dowladdiisu ay howlo badan qabatay halkii sano ee ay jirtay, kuwaasoo uu ka xusay sugidda amniga, dib u habeynta garoosrka dalka, ka hortagga musuqmaasuqa iyo isla xisaabtan la’aanta.
“Dowladeydu waxay dunida hordhigtay barnaamijyo wax ku ool ah oo wata habkii lagu bixinayo lacagaha iyo la xisaabtan adag, kuwaasoo ah buu yiri in dunida la tuso heerka ugu adag ee is-aaminaadda,” ayuu yiri madaxweynaha Soomaaliya oo kulanka ka hadlayay.
Madaxweynaha ayaa beesha caalamka ku ammaanay sida ay u garab-taagan yihiin Somalia, isagoo sheegay in dowladdiisa ay ka go’an tahay inay la timaaddo waxqabad muuqda, gaar ahaan horumarinta maaliyadda iyo in la ciribtiro musuqmaasuqa.
“Waxyaabaha ugu muhiimsan ee dowladeydu ay qaban doonto inta aan ay joogto xafiiska waxaa ka mid ah: dhameystirka dastuurka, hirgelinta nidaamka federaalka iyo sidii jilbaha loogu dhigi lahaa dimuqraadiyad taam ah,” ayuu madaxweynuhu hadalkiisa ku daray.
Isagoo ka hadlayay arrinta dastuurka ku saabsan ayuu sheegay in bishii July ee sannadkan ay xildhibaannada baarlamaanka Soomaaliya ansixiyeen guddi madax-bannaan oo dib u eegaya dastuurka kuwaasoo uu sheegay in laga sugayo inay dowladdiisu magacowdo goor dhow.
Ujeeddada laga leeyahay guddiga dib u eegista dastuurka ayaa lagu sheegay inay tahay sidii ay u diyaarin lahaayeen dastuur dhameystiran oo shacabka Soomaaliyeed ay u codeeyaan.
Hirgelinta nidaamka federalka oo ah caqabadda ugu weyn dowladda Somalia hortaalla ayaa waxaa dowladda looga baahan yahay inay siyaasad hufan oo horseedi karta nidaam goboleysi la timaaddo. Mar uu arrintaan ka hadalay ayuu sheegay in dowladdiisu ay horumar arrintaan ku addan ku tallaabsatay markii ay bishii Ogoosto ee sannadkan heshiis la saxiixay maamulka KMG ah ee Jubba oo ka arimin doona gobollada Jubbooyinka iyo Gedo.
Sidoo kale, mar uu ka hadlayay dimuqraadiyadda ayuu sheegay in dowladda Soomaaliya ay ka go’an tahay in dalka ay ka dhacdo doorasho xor ah marka la gaaro sannadka 2016-ka, markaasoo la doonayo in qof kasta oo Soomaali ahi uu codkiisa dhiibto.
Mar uu ka hadlay barnaamijka Aada Dugsiyada ayuu sheegay inuu qayb ka yahay horumarrada ay dowladdiisu ku tallaabsatay sannadkii ay xafiiska ku sugnayd, isagoo sheegay in barnaamijkani uu yahay mid kumannaan caruur Soomaaliyeed ah u horseedaya inay helaan saddexda sano ee soo socota fursado waxbarasho.
Dhanka kale, madaxweynaha ayaa uga dhawaajiyay khudbadiisa inay dadka Soomaaliyeed ay mararka qaar shaki ka qabaan dowladda, isagoo sheegay inay muujin doonaan dowlad wanaag ay kusoo jiirtaan shacabka, wuxuuna ku saleeyay aamin-darradaas inay ka dhalatay colaadihii sannadaha badan dalka ka jiray.
“Qaar ka mid ah dadkeenna kuma qanacsana barnaamijiyada dowladdeenna waana wax la garan karo, waayo waxaa dhacay dagaallo sokeeye iyo faragelinno shisheeye oo xaq ayay u leeyihiin inay shakiyaan,” ayuu yiri madaxweynaha Somalia.
Ugu dambeyn, madaxweynaha Soomaaliya wuxuu sheegay in sida tartiibta ah ee ay u wadaan howlaha dowladda ay tahay sidii ay howlaha ugu saleyn lahaayeen jidka saxda ah, isagoo ammaanay shacabka Soomaaliyeed ee ku nool Mareyknaka oo uu sheegay inay ka go’an tahay inay caawiyaan dadka Soomaaliyeed meel walba oo ay dunida ka joogaan.
Booqashada madaxweynaha Soomaaliya uu ku tagay Mareykanka ayaa lagu sheegay inay tahay sidii u jaaliyadda Soomaaliyeed ee Mareykanka ku nool uga dhaadhicin lahaa howlaha ay dowladdiisu qaban doonto iyo kuwii ay soo qabatay sannadkii ay xilka haysay.